I-Chondrodite, ephuma eMyanmar / iqela elincabileyo / elincinci / ividyo
Chondrodite, evela eMyanmar
I-Chondrodite iyinaminerali ye-nesosilicate kunye nefomula (Mg, Fe) 5 (SiO4) 2 (F, OH, O) 2. Nangona igalelo elincinane elingaqhelekanga, lilungu elininzi lidibene nalo liqela lezityalo zamaminerali. Iqulunqwe kwiimali zokugcina i-hydrothermal kwi-dolomite yasekhaya. Kwakhona kufumaneka kudibene nekhredithi kunye ne-serpentinite. Kufunyenwe kwi-1817 kuMat. Somma, inxalenye ye-Vesuvius complex eItaly, kwaye ibizwa ngokuba ngu-Greek "for granule", eyinto eqhelekileyo yale mineral.
Mg5 (SiO4) I-2F2 yindlela yokugqibela yelungu njengoko inikezwe nguMbutho weMigodi ye-International Mineralogical, i-molar mass 351.6 g. Ngokuqhelekileyo kukho ii-OH kwiindawo ze-F, nangona kunjalo, kunye noFe noTi bangakwazi ukufaka endaweni ye-Mg, ngoko-ke imfom ye-mineral ebonakalayo ibhalwe ngcono (Mg, Fe, Ti) 5 (SiO4) 2 (F, OH, ) 2.
I-Chondrodite iluphuzi, i-orange, ibomvu okanye ibomvu, okanye ingabonakaliyo engabonakali, kodwa ukuchithwa kwemibala eyahlukeneyo yinto eqhelekileyo, kwaye iiplates ezidibeneyo ze-chondrodite, i-humite, i-clinohumite, i-forsterite kunye ne-monticellite ziye zabikwa.
I-Chondrodite i-biaxial (+), kunye neendleko ze-refractive zichazwe ngokubanzi njenge-nα = 1.592 - 1.643, n = = 1.602 - 1.655, nγ = 1.619 - 1.675, birfringence = 0.025 - 0.037, kunye ne-2V kulinganiswa njenge-64 ° kuya kwi-90 °, ibalwa: 76 ° kwi-78 °. Iingoma ze-refractive zivame ukunyuka ukusuka kwi-norbergite ukuya kwi-clinohumite kwiqela elincinci. Bakwandisa kunye ne-Fe2 + kunye ne-Ti4 + kunye ne-(OH) - endaweni yeF-. Ukusasazeka: r> v.
I-Chondrodite itholakala ngokubanzi kwimimandla yokudibanisa ye-metamorphic phakathi kweer carbonate kunye ne-acidic okanye i-alkaline intrusions apho i-fluorine iye yaqaliswa ngeenkqubo ze-metasomatic. Yakhiwa yi-hydration ye-olivine, (Mg, i-Fe2 +) i-2SiO4, kwaye igxininiswe phezu kweelitha lokushisa kunye neengcinezelo ezibandakanya ezo zikhoyo kwinqanaba lesambatho esiphezulu.